Filtrer les éléments par date : samedi, 10 juillet 2021
samedi, 10 juillet 2021 19:13
Halatra fiara 4x4 : Hita tany Sahambala Toamasina ilay fiara nanjavona tany Moramanga
Tany amin’ny fokontany iray any amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Sahambala, ao anatin’ny Distrikan’i Toamasina II, no hita ilay fiara 4x4 Land Cruiser iray ny zoma 2 jolay lasa teo.
Lavitra sady saro-dalana tokoa izany Sahambala izany, izay any andrefan’i Toamasina no misy azy.
An’ny orinasa Tanety Lava, mpiara-miasa akaiky amin’ny orinasa mpitrandraka harena ankibon’ny tany Ambatovy, io fiara tsy mataho-dalana io.
Nanjavona niaraka tamin’ny mpamily izy ny alarobia 30 jona.
Nandray an-tanana ny fikarohana ny Tobimpileovan’ny Zandarimarian’i Moramanga.
samedi, 10 juillet 2021 19:12
Laurent Simons : Miketrika taova artifisialy mba hahalava velona ny olombelona
Mbola zaza nefa kely mahay sady matsilo saina i Laurent Simons. Teo amin’ny faha-8 taonany izy dia efa nahazo maripahaizana bakalôrea.
11 taona izy izao, ary manana mari-pahaizana mitovy lenta amin’ny « licence » amin’ny lalampiofanana fizika, ary hanomana “master” amin’ny taom-pianarana ho avy.
Belza ny rainy ary avy any Pays Bas ny renin’i Simons. Voalaza fa tsy lavitra an’i Albert Einstein ny haranitan-tsainy.
Ny hanamboatra taova artifisialy hahalava velona ny olombelona no nofinofiny ka hilofosany.
samedi, 10 juillet 2021 14:14
Betsiboka : Tafakatra hatrany amin’ny 8,10t/ha ny taham-bokatra ny voly vary PAPRIZ
Mifarana ny taom-pijinjana vary hasara, na vary be 2020-2021 aty Betsiboka. Nahatratra 6,6 taoninna isaky ny hekitara ny taham-bokatra ankapobeny ho an'ireo tantsaha nanaraka antsipirihany ny Haitao tekinika PAPRIZ, izay niarahana tamin'ny Tetikasa PAPRIZ.
8,10 taonina isaky ny hekitara ny taham-bokatra ambony indrindra, ary 4,2 taonina isaky ny hekitara kosa ny ambany indrindra azon'ireo Tantsaha izay nanao ny voly vary PAPRIZ taty amin'ny Faritra.
Araka ny tomban'ezaka natao dia nahatratra 4 520 820 Ar isaky ny hekitara ny tombony afa-karatsaka ambony indrindra azon'ny tantsaha izay nanaraka ny tekinika PAPRIZ.
Afa-po tamin'ny vokatra niakatra ireo tantsaha PAPRIZ amin'ny ankapobeany, ary maniry ny hanoy izany.
Mahaliana tantsaha maro be ny tekinika PAPRIZ, ary maro ireo tantsaha no maniry ny hanaraka ny haitao tekinika PAPRIZ ao amin'ny Faritra.
(Loharano : DRAEP Betsiboka Maevatanana)
samedi, 10 juillet 2021 14:03
Orange Pro League Madagasikara : Natolotra ny AS ADEMA ny medaly sy amboara
Notanterahina ny alakamisy 08 jolay 2021 tao amin'ny Novotel Ivandry ny fanolorana ny amboara sy fiarabana ny AS ADEMA, klioba nivoaka mpandresy teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny taom-pilalaovana 2020-2021.
Nahitana klioba 13 avy amin'ny lafy valon'ny Nosy nandray anjara tamin’ity fifaninana ity.
Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, Rosa Rakotozafy izay nisolontena ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Tinoka Roberto.
samedi, 10 juillet 2021 14:02
10 juillet : Journée mondiale des "femmes sans voiles".
samedi, 10 juillet 2021 12:32
Faritra : Hapetraka ny faritra faha-23, miandry izay ho Governorany ny ao Betsiboka
Notontosaina ny zoma 09 jolay 2021 teny amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha ny fivoriana niarahan'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina niaraka tamin'ireo Governoram-paritra miisa 21.
Noresahana nandritra izany ny tombana sy jery todik'ireo asa fampandrosoana napetraka manerana ny Faritra rehetra sy ireo tokony mbola hatsaraina hahatratrarana ireo fanamby napetraka ao anaty fohy ezaka sy lavitra ezaka.
"Ny tena anton'izao fihaonana izao dia ny hiarahana mijery ny fomba hanafainganana ny fanatanterahana ireo asa rehetra manerana ireo Faritra izay hiarahan'ireo Governora manatanteraka miaraka amin'ireo vondrom-bahoaka eny ifotony", hoy ny filoha Andry Rajoelina.
Nohamafisin'ny Filoham-pirenena ihany koa ny hametrahana ny faritra faha-23 izay nankatoavin'ny Filankevitry ny Minisitra sy efa nolanian'ireo Antenimiera roa tonta.
Nandritra ity fivoriana ity ihany koa dia nanao ny tatitr'ireo asa vita sy ireo mbola mila hatao ary ireo soso-kevitra entina hanatsarana ny asa eny anivon'ireo faritra hiadidiany tsirairay avy ireto Governora ireto.